दिशाको वि कि नी तस्वीर किन भयो ट्रोलको शि का र ? – " कञ्चनजंगा News "
दिशाको वि कि नी तस्वीर किन भयो ट्रोलको शि का र ?
No Comments on दिशाको वि कि नी तस्वीर किन भयो ट्रोलको शि का र ?
नायिका दिशा पटानी चलचित्रमा मात्र होइन, सामाजिक संजालमा पनि सक्रिय छिन् । दिशा सामाजिक संजालमा आफ्ना ह ट तस्वीर पोष्ट गर्न सधै नै अगाडि छिन् । दिशा इन्स्टाकै माध्यमबाट विभिन्न ब्रान्डको प्रमोशन पनि गरिरहेकी हुन्छिन् । यसरी, ब्रान्ड प्रमोशन गर्दा दिशाले राम्रै रकम कमाउँछिन् ।
उनै, दिशाले हालै मात्र एक वि कि नी तस्वीर पोष्ट गरिन् । यो पनि एक ब्रान्डकै प्रमोशन थियो । तर, यसपटक भने दिशालाई ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुले ट्रोलको शि का र बनाएका छन् । यो तस्वीर पोष्ट गर्दा दिशाको चर्को आ लो च ना भैरहेको छ ।
भारतमा विगत केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकको वि रो ध भैरहेको छ । यो बिषयमा बलिउडकर्मीहरुले केही पनि नबोल्दा उनीहरुकै आलोचना पनि भएको पाइन्छ । दिशाले सामाजिक संजालमा यो तस्वीर पोष्ट गर्ने वित्तिकै उनलाई ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुले नागरिकता विधेयकको बिषयमा कोही पनि नबोलेको तर वि कि नी तस्वीर पोष्ट गरेर बसेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
केही ट्विटर प्रयोगकर्ताले देशको अवस्था विग्रिएको समयमा यस्ता खालका तस्वीर पोष्ट गर्नु सही नभएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । केही सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले देशको विग्रदो अवस्थामा कुनै चासो नदेखाएपनि ब्रान्ड प्रमोशन गरेर पैसा कमाउन दिशालाई चासो लागेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।केहीले देश जलिरहेको समयमा दिशालाई भने वि कि नी बेच्न परेको भन्दै आ लो च ना गरेका छन् । यो बिषयमा दिशाले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्।
← क्रियापुत्री बसेकी दिपक क्षेत्रीको श्रीमतीले भनिन,- म नेपालमै भाको भए, उहाँलाई पानीसम्म त खुवाउँथें (भिडियो हेर्नुस) → अमेरिकी शहर लास भेगसमा एक अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा ६ जनाको मृ*त्यु,१३ जना घा*इते